Useto lwe-iPad: iBluetooth
Kwi-iPad, ungasebenzisa iBluetooth ukunxibelelana ngaphandle kweengcingo zeBluetooth okanye ukusebenzisa ikhibhodi engenazingcingo. Izinto ezinjalo zenziwe yiApple kunye nabanye abaninzi. Ukuqinisekisa ukuba i-iPad isebenza nenye yezi zixhobo, kufuneka ngaphandle kwentambo ngambini, okanye idityaniswe nesixhobo esikhethiweyo.
Kuwo onke amagama awodwa onokuhlangana nawo kubuchwephesha, ibluetooth inomdla. Eli gama lithatyathwe kuHarald Blåtand, inkosi yenkulungwane yeshumi yaseDenmark, owathi, ibali lihamba, wanceda ukumanya amaqela alwayo. Kwaye, njengoko kuxeliwe, ibluetooth iguqulela kwi ibluetooth ngesiNgesi. (IBluetooth konke malunga nokusebenzisana phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zezixhobo-uyayifumana?)
Ukuba usebenzisa i-accessory yeqela lesithathu, landela imiyalelo eza ne-headset okanye ikhibhodi ukuze ibe njalo ifunyenwe, okanye ulungele ukudityaniswa ne-iPad yakho. Emva koko vula iBluetooth (phantsi Ngokubanzi kwiscreen seSeto) ukuze i-iPad ifumane izixhobo ezikufuphi kwaye isixhobo sinokufumana i-iPad.
Kulo mzobo, ikhibhodi engenantambo yeApple kunye ne-iPad zibhangqwe ngempumelelo xa ufaka ipaski echongiweyo kwikhibhodi. I-Bluetooth isebenza ukuya kuthi ga kwi-30 yeenyawo.
Uyazi ukuba iBluetooth ivuliwe xa ubona i icon yeBluetooth kwibar yomgangatho. Ukuba uphawu lumhlophe, i-iPad inxibelelana ngaphandle kwamacingo ngesixhobo esixhumeneyo. Ukuba ingwevu, iBluetooth ivuliwe kwi-iPad kodwa isixhobo esidityanisiweyo asikho kufutshane okanye asivulwanga. Ukuba awuboni i icon yeBluetooth, useto lucinyiwe.
Ukucoca isixhobo, sikhethe kuluhlu lwesixhobo kwaye ucofe ukungalingisi.
I-iPad ixhasa Isitiriyo Iifowuni zeBluetooth, ke ngoku ungasasaza isandi sestereo ukusuka kwi-iPad ukuya kwezo zixhobo.
I-iPad inokucofa kwiBluetooth ngezinye iindlela. Enye kukuba umhlobo kumhlobo Unxibelelwano, ukuze ukwazi ukuzibandakanya kwimidlalo yabadlali abaninzi kunye nezinye izinto ezikufutshane kwi-iPad, kwi-iPhone, okanye kwi-iPod. Unokwenza izinto ezinje ngokutshintsha amakhadi oshishino, wabelane ngemifanekiso, kwaye uthumele amanqaku amafutshane. Kwaye, awunyanzelekanga nokuba ubhangqe izixhobo njengoko usenza nge-headset okanye ngekhibhodi engenazingcingo.
Awunakho ukusebenzisa iBluetooth ukutshintshisa iifayile okanye ukuvumelanisa phakathi kwe-iPad kunye nekhompyuter. Kwaye awunakusebenzisa ukuprinta izinto kwi-iPad kwiprinta yeBluetooth (nangona inqaku le-AirPrint longezwe nge-iOS 4.2 ephatha lo msebenzi kwezinye iimeko). Kungenxa yokuba i-iPad ayixhasi naziphi na iiprofayili zeBluetooth (okanye iinkcukacha) ezifunekayo ukuvumela ezo zinto zingenazingcingo ukuba zithathe.
yintoni eyenziwa yi-desmopressin
liphi igama eliqhelekileyo le prozac
iyeza lokunciphisa amayeza amayeza
Ngaba utywala buyayinqanda i-antibiotics ekusebenzeni
imbaza entsha enemisipha eluhlaza
Isikhokelo seziyobisi i-albuterol